Hindiya oo ku biirtay qorshooyin laga fuliyo Badda Soomaaliya - Awdinle Online
Hindiya oo ku biirtay qorshooyin laga fuliyo Badda Soomaaliya
Dowladda Hindiya ayaa ku biirtay wadamada saxiixay “Xeerka Anshaxa Jabuuti / Wax ka bedelka Jeddah” oo ay horay u saxiixeen wadamada ku midoobay ladagaalanka Burcad badeedka Soomaaliya ee ka howl gala galbeedka Badweynta Hindiya, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.
DCOC / JA oo ah urur ka shaqeeya arrimaha badda oo ka kooban 18 dowladood oo xubno isla markaana dhaca Badda Cas, Gacanka Cadmeed, xeebta Bariga Afrika iyo waddamada Jasiiradda ee IOR ayaa dagaal kula jira burcad badeed waxaana ka shaqeeya wadamada Isticmaala badahaasi.
Dowladda Hindiya ayaa hada ku biireysa wadamada Japan, Norway, UK iyo Mareykanka oo kormeerayaal u ah Ururka DCOC / JA.
DCOC, oo la aasaasay bishii Janaayo 2009, waxaa loogu talagalay in lagu dagaalamo burcad-badeednimada iyo dhaca hubeysan ee ka dhanka ah maraakiibta ku sugan Gobolka Galbeedka Badweynta Hindiya, Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas.
Previous articleDowladda oo kulan deg deg ah isugu yeertay Ganacsatada Soomaaliyeed
Next articleAskari ka tirsan Ciidamada Somaliland oo toogasho lagu dilay